TTSweet: အာဂျီနိူမိုတို (သို့) အချိုမှုန့် (သို့) MSG (သို့) 621 ရှာပုံတော်
Posted by T T Sweet at 10:26 AM
ဆုမြတ်မိုး July 23, 2012 at 11:11 AM
မီးမီးငယ် July 23, 2012 at 11:17 AM
ထဲ့ဖို့ ကိုလက်ကအရမ်းတွန့် တယ်။
ကြက်သားမှုန့် လည်းအချိုမှုန့် လိုပါဘဲ၊
သူ့ ရဲ့ ဆိုးကြိုးကောင်းကြိုးတွေသိတာဟုတ်ဘူး။
Thandar Lwin July 23, 2012 at 11:31 AM
Cho Thettant July 23, 2012 at 2:36 PM
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တီဆွိရေ ဒီမနက်ပဲ ခေါက်ဆွဲကြော်နေရင်း ကြက်သားမှုန့်ကို ကြည့်မိတော့ အချိုမှုန့်အချောင်းလေးတွေ တွေ့လို့ အဲဒီအကြောင်း စဉ်းစားမိနေတာ။ ဘာပဲပြောပြော ညီမလည်း အချိုမှုန့်ကို စိတ်မချတဲ့ အထဲမှာပါလို့ အိမ်မှာ ကြက်သားမှုန့်ပဲ သုံးတာ .... အခုတော့ :P
ကျွန်တော်လည်း ကြက်သားမှုန့်မှာ အချို့မှုန့် မပါဘူးထင်ပီး တအားသုံးတာ။ အချို့မှုန့်တော့ ချင့်ချိန်သုံးပါတယ်။
ရည်းစားဟောင်းတစ်ယောက်ဆိုရင် အချိုမှုန့်သုံးလွန်းလို့ သူနဲ့သာနေရင် ငါမြန်မြန်သေမှာပဲလို့ တွေးမိဖူးတယ်။း)
ဗဟုသုတတွေ ဝေမျှပေးလို့ ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ။
အချိုမှုန့်ကိုအိမ်မှာမသုံးတော့အပြင်စာတွေစားပြီးရင်ခေါင်းအရမ်းကိုက်ရော။ဂိတ်ဆုံးသံပရာရေ သောက်လိုက်မ သက်သာတယ်။ Panadol သောက်ရင်လဲသက်သာပေမဲသံပရာရေမရမဘဲသောက်ဖြစ်တယ်။
T T Sweet July 23, 2012 at 9:54 PM
11:09 AM (10 hours ago)
mstint has leftanew comment on your post "အာဂျီနိူမိုတို (သို့) အချိုမှုန့် (သို့) MSG (သို့...":
ဗဟုသုတတွေအများကြီးရသွားတယ် ဆွိတီရေ။ တီတင့်လည်း အချိုမှုန့်မသုံးတာ အိမ်ထောင်တစ်သက်ပါပဲ ဒါပေမယ့် သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် တီတင့်ဖွားဖွားဆိုလည်း အချိုမှုန့်မပါရင် ဟင်းမချက်တတ်ဘူး။ သူဆုံးတော့ အသက် ၈၆နှစ်ပါ။ တစ်ခြားလည်းဘာရောဂါမှ မရှိတော့ အဒေါ်တွေက အချိုမှုန့်က ရောဂါဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကို ဒီကနေ့အထိ လက်မခံကြဘူး။ အချိုမှုန့်နဲ့ဓာတ်မတည့်တဲ့သူတွေအတွက်သာ အန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ်လို့ ယူဆရမလိုဖြစ်နေပြီး)
Mary Grace July 23, 2012 at 9:55 PM
လူအေး July 24, 2012 at 4:40 AM
အချိုမှုန့်အကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပုံစံမကဘဲ တက္ကသိုလ်မှာရေးရတဲ့ အဆိုင်းမင့်အက်ဆေး တစ်ပုဒ်လိုပါရေးသွားတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်ဗျာ။ အခုလိုသမာန်ကာလျှံကာမလေ့လာဘဲ chemical structure တွေ background တွေ ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ နောက်ဆုံး reference sites တွေပါထည့်ပေးတာ အမဆောင်းပါးက ကျန်းမာရေးရှုထောင့်တင်မကဘဲ တကသိုလ်မှာပညာသင်နေတဲ့ (အထူးသဖြင့် MSG အကြောင်း assignment ရေးမဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေ) အတွက်ပါအထောက်အကူပြုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်လဲ ဒီလိုမျိုးဆောင်းပါးလေးတွေ ကြုံရင်ရေးပါဦး။ အစဉ်အားပေးလျက် ...
Adora etc. July 24, 2012 at 11:29 AM
မေမေလဲ အချိုမှုန့်သိပ်သုံးတာ။ မနဲကြက်သားမှုန့်ပြောင်းသုံးခိုင်းရတယ်။ ခုတော့ ဟီးဟီး။ ဗဟုသုတရတယ်အမ။.
sosegado July 24, 2012 at 5:30 PM
Nowadays Glutamate is everywhere, unless you have some health problem you have to avoid not only MSG but also others.
ယနေ့ လူတွေဟာ chemical တွေနဲ့ နိုးထပြီး အိပ်ရာဝင်ကြတာပါ၊ သွားတိုက်ဆေး နက်စ်ကာဖီကနေ့ အချုိုရေတွေအထိပေါ့။
မြသွေးနီ July 25, 2012 at 8:24 PM
အချိုမှုန့်သမိုင်းကို အခုမှ ဂဃနဏ သိရတော့တယ်။ အချိုမှုန့်အစ ဂျပန်ကပေါ့နော်။ အိမ်မှာအချိုမှုန့်ဖြတ်ထားတာ ငါးနှစ်လောက်ရှိပြီ။ ခနောကြက်သားမှုန့် အစားထိုးသုံးနေတယ်။ ဒါပေမယ့် အစ်မဆွိပြောသလိုပဲ ခနောမှာလဲ အချိုမှုန့်ပါတယ်သိထားပေမယ့် သူ့တော့ မဖြတ်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဟင်းက သူမပါရင် စားရတာ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်နဲ့ ထင်နေမိတယ်။ ရောဂါကို ၀ယ်ယူစားသလိုဖြစ်နေတာတော့ သိတယ်။ သို့သော်.. မဖြတ်နိုင်သ၍တော့ လျော့သုံးယုံမှတစ်ပါး...။
သိင်္ဂါကျော် July 28, 2012 at 6:28 PM
အချိုမှုန့် နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ သိရလို့ ကျေးဇူး...
San San Htun July 30, 2012 at 12:50 AM
ကြက်သားမှုန့် သုံးတယ် တီဆွိရေ..သူလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါလားး.အိမ်ရှင် အမေရိကန်မကတော့ MSG ကြောက်တယ်..
Can you tell me what Burmese font you are using for your blog? I haveaMac and I am having difficulty finding the correct Burmese font to display your blog, and other blogs. I have tried Zawgyi and some of the unicodes, but can't seem to get the correct one that displays the fonts correctly for everything. Thanks in advance for your help! Cheers!!!!
blackroze July 31, 2012 at 5:21 AM
မြစ်ချေသူ August 1, 2012 at 5:02 PM
အခုနောက်ပိုင်း ကြက်သားမှုန့် ပိုသုံးဖြစ်လာတယ်။
တော်တော်လေးအချိန်ပေးပြီး စုစည်းတင်ပြပေးထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Thank you very much sister. Let me share it.
ကျွန်မလည်းMSG ကြောက်လို့ ဆိုပြီး ကြက်သားမှုန့် သုံးနေတာ သေသေချာချာ ဖတ်တော့ monosodiumglutamate ပါတော့ ခေါင်းကိုက်သွားတယ် ဒါနဲ့ ရှာရင်းရှာရင်းနဲ့no added MSGလို့ေ၇းထားတဲ့ ငါးမှုန့် ပဲသုံးတယ် ၆၂၁ ပါ မပ်တော့ မသိဘူး အစ်မရယ် စိတ်ညစ်တယ် သရဏဂုံပဲ ရွတ်ပြီးစားတော့မယ်
knorr ကထွက်တယ် NO added MSG က ဈေးနှစ်ဆကွာတယ် အဲဒါပဲ ၀ယ်သုံးတယ် အချဉ်ရည်က အစပေါ့ ခေါက်ဆွဲလည်းရှိတယ်...